Ukujonga kumzi mveliso ngale ndlela, bobabini bajongeka njengeenkampani zesoftware. Oko ngekhe kuqhubekeke kwinyani- kodwa kunzima ukuyichaza loo nto ingcali enamava ye-IT engathandi ukuyekelela kulawulo kuye nabani na- nokuba ubuchule buni.
Iinkampani zesoftware zenza izisombululo zesoftware. Ababoneleli ngeNkonzo yokuSebenza ngamaqabane eshishini aphucula izisombululo zesoftware. Umthengisi wesoftware unokuxhomekeka kwinkxaso ye-bug kunye neempawu ezintsha; apho i-ASP inokuxhomekeka ekuqondeni umzi mveliso, iintsingiselo zayo, ukulawula impumelelo kunye nokukhula kwabaxhasi, kunye nokuqhubeka nokukhupha ukukhutshwa ngelixa kugcinwa ixesha eliphantsi.
Amaqela okuhambisa asebenza nabanikezeli beenkonzo ze-Intanethi ukuqinisekisa ukuba i-imeyile yakho ayichazwa gwenxa njenge-SPAM kwaye ivuselele ukufakwa kuluhlu lwabamnyama.
Umdibaniso kubahlalutyi, Iinkqubo zolawulo lomxholo, Intengiso-nganye-yokuthengisa, ukuthengisa nge-imeyile kunye nezinye izixhobo zentengiso kubalulekile kulo naliphi na iqonga le-ecommerce. Ngaba 'isoftware' yakho ikwenzela le nto? Hayi. Kodwa i-ASP yakho kufanele ukuba ibe yiyo.
Ii-ASPs zirhangqe italente yazo kwintengiso, kwaye bazakhile izicelo ezisebenzisa zombini iziseko kunye nenkonzo yokubonelela ngezona ziphumo zibalaseleyo. Ii-ASPs zisebenza ngokukhawuleza kwaye impumelelo yazo ibotshelelwe ngqo kwimpumelelo yeshishini lakho.
Olunye uncedo lokugqibela kwii-ASPs, ewe, yindlela ekuhlawuliswa ngayo isoftware. Ii-ASPs zibonelela ngemodeli yobhaliso apho ababoneleli besoftware banikezela ngemodeli yokufumana ilayisensi. Uthini umahluko? Uthenga isoftware kwaye uyayiqhuba. Ukuba ayisebenzi, ixhomekeke kumbutho wakho ukuze isebenze. Umnqweno omhle! Ngee-ASPs uqhuba isoftware emva koko uhlawule ukusetyenziswa kwayo.